Pakistan: Qarax dad ku dhinteen - Worldnews.com
Weerar isqarxin loo maleynayo oo lagu qaaday isbitaal ku yaal magaalada Quetta ee dalka Pakistan, ayaa lagu dilay in ka badan 60 ruux, iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro dad ah.
Ugu yaraan 18 ka mid ah dhimashada, ayaa qareeno ahaa oo dhismaha u yimid tacsida mid ka
22 Qof oo ku Dhintay Qarax ka Dhacay Pakistan
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in qarax bam oo xooggan uu ruxay suuq mashquul badan oo ku yaalla magaalo qabaa’ilka degaan oo dhacda waqooyiga galbeed ee dalkaas...
PAKISTAN: 8 ku dhimatay weerar lagu qaada Kaniisad
Ugu yaraan 8 qof oo 3 haween ah ay kamid yihiin ayaa ku dhintay, 16 kalena way ku dhaawacmeen weerar lagu qaadey Kaniisad ku taalla magaalada Quetta ee dalka Pakistan....
Pakistan 'oo bilowday gantaal riddo dheer oo laga rido badda hoosteeda
Militariga dalka Pkaistan ayaa shaaciyay inay si guul ah ku dhammaatay tijaabada gantaalkoodii ugu horeeyay ee riddo dheer oo badda hoosteeda laga rido. Gantaalka loogu...
Dawladda Islaamka oo dad badan ku laysay Pakistan
Qarax ka dhacay masaajid caan ah oo ku yaalla Koonfurta Pakistan ayaa dilay ugu yaraan 72 ruux, sida ay booliisku sheegeen. Qofka qaraxa gaystay ayaa isku qarxiyay dad...
Dad isku qarxin rabay maxkamad oo Pakistan la laayay
Ugu yaraan hal qareen ayaa dhintay kuwo kalana way dhaawacmeen ka dib markii la weeraray maxkamad ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan, sida ay sarakiishu sheegeen....
Ra'iisal wasaarihii Pakistan oo xilka iska casilay
Ra'iisalwsaaraha dalka pakistan, Nawaz Shariif ayaa xilka iska casilay ka dib markii maxkmadda ugu sarreysa dalkaasi ay go'aamisay inuusan u qalmin sii haynta xilkaasi....
Ra\_'iisal wasaarihii Pakistan oo xilka iska casilay
Ra'iisalwsaaraha dalka pakistan, Nawaz Shariif ayaa xilka iska casilay ka dib markii maxkmadda ugu sarreysa dalkaasi ay go'aamisay inuusan u qalmin sii haynta xilkaasi. Baaritaanka ayaa lagu sameeyey hantida qoyska Nawaz Sharif, kadib markii sanadkii 2015-kii ay soo baxday "cadaymihii Panama", taasi oo lagu sheegay in qoyska ra'iisal wasaaruhu ay ku lug leeyihiin shirkado ku...
Pakistan iyo India oo wadahadal u furmayo
Pakistan iyo India ayaa ku heshiiyey inay sii wadaan wadahadallo mug weyn oo looga hadlayo arrimaha ay labada dhinac isku hayaan, kaddib kala fogaansho jiray 7 sano. Go'aanka ayaa waxaa Islamabad uga dhawaaqay wasiiradda arrimaha dibadda ee labada dal. Heshiiskan cusub ayaa loo arkaa hormar ay sameeyeen labada dal ee deriska ah, isla markaana haysta hubka nukliyeerka ah, ayna...
Suuq ku yaalla Pakistan oo la qarxiyay ayaa lagu dilay 20 qof
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, qiyaastii 40 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaallaa magaalo ku taalla Waqooyi-Galbeed ee Pakistan. Qaraxa wuxuu ka dhacay magaalada Panachinar oo ay u badan yihiin Shiico. Waxaynaa ku taaalla xuduudda Afghanistan. Suuqa waxaa ka buuxay dad adeeganayay markuu qaraxa dhacaayay. Saraakiisha dowladda...
MUQDISHO, Soomaaliya - Qarax xooggan oo khasaarooyin kala duwan sababay ayaa saaka oo sabti ah waxa uu ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho, ee Caasimadda Soomaaliya. Goob-joogiyaal ayaa Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay in qaraxa uu ka dhashay Bam gacmeed lagu tuurey fariisin ciidamada xasilinta ay ku leeyihiin Isgoyska Fagax ee degmada Yaaqshiid. Inta la xaqiijiyay labo...
Howlgal amni oo ka bilowday Pakistan ka dib qaraxii 72 qof lagu dilay
Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay dagaalyahanno mintidiin ah ku dishay howlgal ay fulisay ka dib weerarkii 72-da qof lagu dilay. Ururka Daacish ayaa weerar ku qaaday boqollaal qof oo ku sugnaa qabri. Qiyaastii 18 jihaaddoonayaal ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay Koofurta gobolka Sindha, halkaas oo ah meesha uu ku yaallo qabriga ay siyaaranayeen Suufiyada la qarxiyay. In...